Waa maxay Qorshaha Laba Geesoodka ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Qorshaha laba geesoodka ah ayaa ah nooc ka mid ah qorshaha caymiska caafimaadka. Waxaa loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Haddii aad tahay qofka haysto, waxaad tahay “qof u-qalma labada caymis.” (Taasi waa qaab kale oo lagu yiraahdo waxaad isku mar heli kartaa Medicaid iyo Medicare). Context link
Maxaa ka dhigaya qorshahan mid loogu talagalay dadka u-qalma labada caymis?
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxaa loogu talagalay dadka u baahan waxoogaa caawimo dheeraad ah. Taasi waxaa sabab u ah dakhliga, naafonimada, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaadka. Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waa nooc ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage. Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxaa sidoo kale loogu yaaqaan D-SNP marka la soo gaabiyo. Magacyadaan dhammaantood waa isku mid.
Sidee caymiska caafimaadka laba geesoodka ah ula shaqeeyaa Medicaid iyo Medicare labaduba?
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ayaa la shaqeeya qorshaha caafimaadkaaga ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Inta badan qorshayaasha caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay sidoo kale ku siinayaan macaashyo iyo sifooyin ka badan kuwa aad ka hesho Original Medicare. Dhammaan lacagta ugu hooseysa ee dhan $0 ee carbuunta qorshaha.
Caawimaad badan oo adiga laguugu talagalay
Isuduwidda daryeelka waa macaash kale oo weyn oo aad ka hesho Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah. Waxaad yeelan doontaa isuduwaha daryeelka ee gaarka ah. Kaasi waa qofka ku caawin kara:
Faham macaashyadaada Medicaid iyo Medicare.
Maree dhakhaatiirtaada, khabiiradaada iyo adeegyada daryeelkaaga.
Hel adeegyada aad u baahan tahay si aad u dareento caafimaadka ugu wanaagsan ee aad awooddo.
Haddii aad u-qalanto labada caymis, sidee ku heli kartaa qorshahan caafimaad?
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxaa bixiya shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay. Kuwaasi waxaa ku jira UnitedHealthcare. Waxaan ugu yeernaa qorshayaashayada UnitedHealthcare Dual Complete®. Waxaan u adeegaynay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee daryeelka caafimaadka in ka badan 40 sano. Waxaana u adeegnaa xubno badan oo si buuxda labada caymis ugu qalmaan oo joogaan gobollo badan marka loo eego shirkad kasta oo kale oo daryeelka caafimaadka.1
1 Iyadoo ku salaysan saamiga suuqa qaranka laga bilaabo 2019
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:25 SUBAXNIMO CDT